Ukufakwa amakhodi kwe-Firmware - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ithimba lokufaka ikhodi le-Fumax firmware lizobhala i-firmware ethile ngokuya ngezidingo zamakhasimende. I-firmware izocushwa ku-hardware (PCBA) edizayinelwe ithimba lobunjiniyela le-Fumax. Umkhiqizo ophelele osebenzayo uzothengwa kumakhasimende ukuze uqinisekiswe. Akuve kujabulisa, ukuthi ikhasimende libone umbono omusha ufika kumkhiqizo wangempela!
Ukusebenza neFumax, vula imibono yakho ibe ngokoqobo!
Isoftware yeMicrocontroller ingukusebenza okuyisisekelo kweFumax Tech, futhi isenhliziyweni yemikhiqizo eminingi esisebenza kuyo. Isipiliyoni nolwazi lwe-Fumax Tech olubanzi lwe-microcontroller nolwazi lisho ukuthi siyakwazi ukuncoma futhi sisebenzise iprosesa ehamba phambili yezidingo ezithile zeklayenti ngalinye.
Isipiliyoni sethu sihlanganisa zonke izinketho ze-microcontroller ezitholakalayo, kusuka kumadivayisi aphansi we-8-bit kuya kumadivayisi asebenza kakhulu we-multicore 32-bit.
IFumax Tech isebenzise amakhulu amaningi wemiklamo isebenzisa amadivayisi ahlukahlukene we-8-bit. Lawa ma-microcontroller amancane kepha anamandla angasebenza njengamadivayisi we-peripheral noma aqhube lonke uhlelo olungenantambo oluphathwayo. Iprosesa eyi-16-bit ivame ukugcwalisa amandla we-niche phakathi kwamadivayisi we-8-bit no-32-bit. Amaprosesa wokusebenza okuphezulu angama-32-bit angasebenzisa i-Embedded Linux® noma i-Windows Embedded kanye ne-natively isekela i-interface ye-Ethernet, izibonisi ezinkulu ze-LCD, isikrini sokuthinta nezinkumbulo ezinkulu.
Ithimba lesoftware leFumax Tech's microcontroller lisebenza nawe isikhathi sephrojekthi yakho. Ngesikhathi sesigaba sokwakhiwa kwephrojekthi sihlola izidingo zohlelo bese sikhetha iprosesa efanelekile yomsebenzi. Sisebenza nethimba likagesi ukuhlanganisa isoftware nehadiwe, futhi sakhe ikhodi yokuhlola ukuvumela ukuhlolwa kokuqinisekisa okusheshayo kwamabhodi amasha. Sisekela isoftware ngokuhlolwa kwesistimu futhi singakha ikhodi yokuhlola ukuqinisekisa ukusebenza ngaphambi kokuthi umkhiqizo uhlanganiselwe ukuthunyelwa.
Okulandelayo uhlu lwezinkampani ze-MCU esizisebenzise ngaphambilini.
Izinkampani ze-Western MCU:
Umkhiqizo waseTaiwan MCU:
I-MCU yasendaweni yamaShayina:
Sino Umcebo, www.sinowealth.com